ဟာသ မှ အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာမယ် Learning English From Jokes (3) - Myanmar Network
ဟာသ မှ အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာမယ် Learning English From Jokes (3)
Posted by Learner on November 23, 2013 at 12:19 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ဂျွန် နှင့် ဒေးဗစ်တို့မှာ စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံမှ လူနာများ ဖြစ်ကြသည်။
တစ်နေ့ သူတို့နှစ်ယောက်သား ဆေးရုံရေကူးကန်အနား ဖြစ်လျှောက်နေစဉ် ဂျွန်က
ရုတ်တရက်ရေကူးကန်၏ ရေနက်ရာနေရာသို့ ခုန်ချလိုက်ရာ နစ်မြုပ်သွား၍ ပြန်ပေါ်မလာတော့ပေ။ ဒေးဗစ်လည်း ချက်ချင်း ခုန်ချလိုက်ပြီး ကန်အောက်ခြေမှ ဂျွန်ကို ဆယ်ယူကာ ကယ်တင်ခဲ့၏။
ဆေးရုံအုပ်ကြီးမှာ ဒေးဗစ်၏ ချီးမွမ်းဖွယ်လုပ်ဆောင်မှုကို သိရှိသွားကာ စိတ်ကျန်းမာရေးပြန်လည်ကောင်းမွန်ပြီဟု ယူဆသည့်အတွက် သူ့အားဆေးရုံမှ ဆင်းခွင့်ပြုရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
" ဒေးဗစ် ခင်ဗျားကို ကောင်းသတင်းတစ်ခုနဲ့ ၀မ်းနည်းစရာသတင်းတစ်ခုပြောစရာရှိတယ်၊ သတင်းကောင်း ကတော့ ခင်ဗျားဟာ တခြားလူနာတစ်ဦးရဲ့အသက်ကို ကယ်တင်ခဲ့လို့ ကျန်းမာရေးပြန်ကောင်းမွန်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ ခင်ဗျားကို ဆေးရုံကဆင်းခွင်ပြု
မဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်။ အဲ ၀မ်းနည်းစရာသတင်းကတော့ ခင်ဗျားကယ်တင်ခဲ့တဲ့ ဂျွန်ဟာ
ရေချိုးခန်းထဲ မှာ သူ့ကိုယ်သူ ဆွဲကြိုးချသေဆုံးသွားတယ် ဆိုတဲ့သတင်း ပါဗျာ.."
ထိုအခါ ဒေဗစ် ပြန်ပြောလိုက်သည်မှာ.....
"အို ဒေါက်တာ....ဂျွန်သူ့ကိုယ်သူ ဆွဲကြိုးချတာ မဟုတ်ဘူးဗျ....အဲဒီမှာ ကျွန်တော်
သူ့ကို ကြိုးနဲ့ဆွဲပြီး ရေစိုနေလို့ အခြောက်ခံထားတာဗျ........"
John and David were both patients inaMental Hospital. One day, while they were walking, they passed the hospital swimming pool and John suddenly dove into the deep end. He sank to the bottom and stayed there. David promptly jumped in and saved him, swimming to the bottom of the pool and pulling John out. The medical director came to know of David's heroic act. He immediately ordered that David be discharged from the hospital as he now considered him to be OK. The doctor said, "David, we have good news and bad news for you! The good news is that we are going to discharge you because you have regained your sanity. Since you were able to jump in and save another patient, you must be mentally stable. The bad news is that the patient that you saved hung himself in the bathroom and died after all.
" David replied, "Doctor, John didn't hang himself. I hung him there to dry."
အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာသူများ ရယ်မောခြင်းဖြင့်လေ့လာသင်ယူကာ ဘ၀အမောပြေပါစေ